Ilka-xanaf oo ka cabanaya in AMISOM ilaalin weyday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 14 July 2014 15 July 2014
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya, Avv. Caydiid C/llaahi Ilka Xanaf ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay diideen inay ilaaliyaan xarumaha hay’adaha garsoorka dalka, isagoo intaas ku daray in AMISOM ay howsheedii qayb ka mid ah dayacday.
Sidoo kale, guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay in marka u doonayo in uu howl ama shir qabsado uu meelo kale ku qabsado nabadgalyo la’aan awgeed. wuxuuna intaas ku daray inaanu jirin hal garsoore oo ilaalo haysta, taasoo ah midda keentay in dadka howlaha garsoorka ka shaqeeya la laayo.
Ilkaxanaf ayaa dhawaan si toos ah uga horyimid xeer uu meel mariyey baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo loogu talagalay golaha adeega garsoorka ee isagu madax ka yahay.
Xeerkaan oo ay baarlamaanka u gudbisay wasaaradda cadaaladda ayaa laga yaabaa inuu meesha ka saaro qaar ka mid ah ama dhamaan xubnaha golaha adeega garsoorka.
Bishii April ee sanadkii hore ayaa Alshabaab weerara saacado qaatay ku qaadeen guriga garsoorka, waxaana halkaas lagi dilaay ilaa 50 qof.